Enweghị oku Ndepụta, Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Gị Na-eto Eto Na-ezighi ezi | Martech Zone
Anyị nwere ndị ahịa ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ngalaba n'ime ahịa… mmekọrịta ọha na eze, mgbasa ozi ọdịnala, njikarịcha ọchụchọ, ahịa mkpanaka, mmepe ọdịnaya na ndị ọzọ. N'ime afọ gara aga, anyị maara na okporo ụzọ na ntụgharị maka SEO na ọdịnaya nwere okpukpu abụọ n'ihi nchịkọta na-arụ ọrụ nke ọma na saịtị.
Enwere nnukwu nsogbu, n'agbanyeghị. Ngalaba ahia ha na-eji otu nọmba ekwentị eme ihe niile mkpọsa n'agbanyeghị agbanyeghị. Ihe si na ya pụta bụ na onye ọ bụla na-akpọ ụlọ ọrụ ahụ na ndabara na mgbasa ozi ọdịnala. Ọ bụ ezie na enwereghị obi abụọ ọ bụla na mgbasa ozi ọdịnala na-akwọ ụgbọala, onye ahịa ya na-atụle mmetụta ya na-elelị mmetụta nke mgbasa ozi dijitalụ na-enwe n'ihi na ha enweghị oku na-esochi.
Gịnị bụ oku na-eso?
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa buru ibu nwere sistemụ ekwentị nke na-enye ọtụtụ oku ekwentị ka ọ nwee ọgụgụ isi mee ka ụlọ ọrụ nwee ọgụgụ isi. Nzuzo dị ugbu a ebe ị nwere ike n'ụzọ ziri ezi soro isi iyi mkpọsa nke oku ekwentị site na ịgbanwe nọmba ekwentị maka mkpọsa ọ bụla. Mpempe akwụkwọ ozi nwere ike ịnwe otu nọmba ekwentị, ebe nrụọrụ weebụ nọmba ekwentị ọzọ, azụmahịa telivishọn na nọmba ekwentị ọzọ.
Ọrụ dị na-enye ndị ụlọ ọrụ ohere ịgbakwunye nọmba ekwentị akọwapụtara maka mkpọsa ma jiri ha mee ihe n'ụzọ ziri ezi soro oku. Ihe ntanetị ndị a amalitela ma nwee ike ịnyekwuo ziri ezi - gbanwee nọmba ekwentị na saịtị gị dabere na isi mmalite ka ị nwee ike soro ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, email na mkpọsa ndị ọzọ. A na-akpọ ọrụ ahụ oku na-esochi (Ọzọ: video nkọwa nke oku nsochi).
Ntak-a ahu nagide oku Ndepụta?
na ihe karịrị 2 ijeri smartphones eji ya zuru ụwa ọnụ, njem ndị ahịa na-aghọwanye ihe mgbagwoju anya, na ndị mmadụ na-agbanwe n'etiti mobile, desktọọpụ, pịa na oku. Teknụzụ na-aga n'ihu na-ejikọ weebụ yana mkpanaka. Ọtụtụ ngwaọrụ na-akpaghị aka na-achọpụta nọmba ekwentị na ngwa na ihe nchọgharị ma ị nwere ike ịpị ịkpọ ha. Ọzọkwa, ị nwere ike hyperlink nọmba ekwentị n'ime gburugburu nke saịtị. iPhone ka tọhapụrụ arụmọrụ na gbatịrị gị ama gị na desktọọpụ seamlessly otú i nwere ike iji kọmputa gị ịkpọ oku ekwentị.
The inbound oku ọwa na-eto n'ike n'ike, mana ndị ahịa anaghị enwe nkọwa doro anya nke mkpọsa na-akwọ ụgbọala kachasị mma. Havingnweghi data iji jikọọ mmekọrịta dị iche iche na ntanetị na ntanetị, dị ka ịkpọ oku, nwere ike ịfu ụlọ ọrụ ọtụtụ nde ohere ohere enweta. Ihe omuma a site na Kpọọ na-enye ndabere na ihe kpatara ndị ahịa ji eche echiche gbasara data ahịa ha gbasara oku abụọ NA pịa.
An soro ebook na-enye ndụmọdụ dị irè banyere otu ndị ahịa ahịa nwere ike isi tinye ọgụgụ isi na ngwa ọrụ ha, na-achọpụta oku dịka clicks iji mee ka ndu ndị ọzọ dị elu.
N'ime ụwa na-agagharị, Invoca na-enye ọgụgụ isi oku na igwe ojii na-ere ahịa iji nyere ndị ahịa aka ịkwanye oku mbata ma gbanwee ha n'ahịa. Ikpokoro Invoca na-anapụta ọgụgụ isi mbata nke achọrọ maka ndị na-ere ahịa ijide ma bulie njikọ ndị ahịa na ire ahịa karịa pịa. Site na njirimara na ebumnuche, ndị na-ere ahịa na-enweta nghọta zuru oke banyere njem ndị ahịa gafere na ntanetị, mkpanaka na ntanetị aka ka ha wee nwee ike ịkwalite ahịa ha na-emefu, kpụọ oku inbound dị mma ma nyefee ahụmịhe ahịa ka mma.
Tags: Attributionoku na-esochiinfographicinvocanọmba ekwentịEkwentị nsochi
Dee 30, 2014 na 4: 59 AM
Akwa isiokwu! Ekwenyere m kpamkpam na oku nsuso nwere nnukwu mmetụta ma na-enyere ndị azụmaahịa aka nyochaa ọ bụla ahịa ahịa ha dị irè n'oge ma hapụ ha ka ha mee mkpebi ọsọ ọsọ zuru oke na mgbanwe iji bulie ROI.
Daalụ maka nnukwu isiokwu!
Dec 31, 2014 na 6:10 PM
Bet nzọ! Jiri okwu ọma ndị ahụ kpọrọ ihe.